हनिमुन नसकिँदै मुख्यमन्त्री राईलाई ‘धर्मसंकट’ ! – Satyapati
हनिमुन नसकिँदै मुख्यमन्त्री राईलाई ‘धर्मसंकट’ !
काठमाडौं । नेकपाका नेता, पूर्व केन्द्रीय मन्त्री एवं वर्तमान प्रदेश सरकारका प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई धर्मसंकटमा परेका छन् । माघ ११ गते आइतबार मात्रै विवाह बन्धनमा बाधिएका राईमाथि विवाह खुसीको खबर भए पनि मुख्यमन्त्री पद भने खुस्किन लागेको चर्चा हुन् थालेको छ ।
काठमाडौंका आलिसन पार्टी प्यालेसमा विहे गरेर हनिमुनको रौनकमा रहेका मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अहिले नेकपाका आफ्नै समूहका नेताहरु पनि रुष्ट भएका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदलाई आफूतिर तान्ने प्रयासमा रहेका मुख्यमन्त्री राई आफ्नै समूहका सांसद अर्कातिर लागेकोबाट भने बेखबर छन् ।
त्यसमाथि नेपाली काँग्रेसले राईलाई समर्थन नगर्ने संकेत दिएको छ । काँग्रेसका २१ जना सांसदमध्ये अहिलेसम्म राईको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने तर्क गर्ने सांसदको संख्या ५ जनामात्रै रहेको स्रोत बताउछ । संसदीय दलका नेतादेखि प्रमुख सचेतक, सचेतक पनि मुख्यमन्त्री राईलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रदेश १ को संसदीय दलमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका सांसदको संख्या अल्पमत छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षमा सांसदहरु मुख्यमन्त्रीमा राईलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । बरु मुख्यमन्त्री नभए पनि हुन्छ तर राईलाई जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्ने अभियान सुरु भएको छ । अहिलेसम्म १६ जना सांसद वरिष्ठ नेता पौडेलको पक्षमा देखिएका छन् ।
संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, प्रमुख सचेतक केदार कार्की खुलेरै मुख्यमन्त्री राईको विरुद्धमा लागेका छन् । त्यसैले मुख्यमन्त्री राईले काठमाडौंमा विहेको रमाइलो बिताउँदै गर्दा प्रदेश–१ मा भने मुख्यमन्त्रीविरुद्धको गठजोड बलियो बन्दै गएको छ । मुख्यमन्त्री राईको हनिमुन अवधि नसकिँदै मुख्यमन्त्रीबाट हट्नै पर्ने परिस्थिति दैलोमा खडा भएको चर्चा विराटनगरमा सुरु भइसकेको छ ।